Ibhonasi ebuyisa imali phambili | Buyisela Imali ekulahlekelweni - UK 2021 ✅
Home » Ibhonasi yekhasino » Ibhonasi ebuyisa imali
Ukubuyiselwa emuva kweKhasino
Ibhonasi ye-Casino Cashback ichaziwe
Ukubuyiselwa emuva ngemali yangempela
Ukubuyiselwa emuva ngezimali zebhonasi
Ukubuyiselwa imali nge-Free Spins
Izinzuzo ze-Cashback vs Amabhonasi ejwayelekile e-Casino
Okubi kwamabhonasi we-Cashback vs Standard Casino
Imigomo Nemibandela ejwayelekile ye-Casino Cashback Offers
I-FAQ yebhonasi ebuyisa imali
Kumakhasino aku-inthanethi, imivuzo yokubuyisa imali ivame ukusetshenziselwa ukugcina abadlali. Le mivuzo ingeza ngesimo semali yangempela, imali yebhonasi, noma i-spins yamahhala, kepha umthetho oyisisekelo uhlala unjalo. Le mivuzo iyasiza kumsebenzisi, kepha ayiholeli umsebenzisi ukuthi akhiphe imali yakhe ukuze asizakale.
Ngokuphikisana nokuwina kwendabuko nokunikezwa, imivuzo yokubuyisa imali yekhasino ayisetshenziswanga ngokuqinile ukuklomelisa abadlali ngokujoyina nokuphumelela ekugembuleni kwabo okuku-inthanethi. Zibuye zisetshenziselwe ukuhlinzeka ngesikhuthazo kubadlali abangahle babe nenhlanhla ethile. Ngokunikeza labo badlali ukunambitheka okuncane, amakhasino angabagcina benentshisekelo noma ngabe izinto azihambi ngendlela yabo.
Ngokuvamile, le mivuzo ikunikeza inani elincane kunelilahlekile, kepha kusenele ukuthi ukwazi ukwazisa inzuzo ongayilindele. Ikhasino lingahle likunikeze imali engu-5% yokubuyisa imali nganoma ikuphi ukulahlekelwa oke wakuthola evikini elithile, ngakho-ke noma ulahlekelwe yimali enkulu, usengathola okwanele ukubuyisela isiphuzo noma isidlo.
Ukusebenzisa imali yangempela akuvamile njengokukhethwa kukho okulandelayo, kepha kuyasetshenziswa, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokunikezwa kwemali emuva ngokuya ngamaphesenti wokuwina kwakho noma ukulahleka kwakho. Le nqubo ilula impela, nekhasino imane ifake inani lemali elishiwo ku-akhawunti yakho, engahle ihoxiswe noma isetshenziselwe ukugembula ngokuqhubekayo. Endabeni yemiklomelo yenduduzo ikakhulukazi, kunethemba elithile lokuthi lo mklomelo uzosetshenziswa ukuzama ukubuyisa yonke imali yakho elahlekile.
Okuvame kakhulu kunokukunikeza imali yangempela ngaphandle kwezintambo ezinamathiselwe ukukunikeza uhlobo olukhethekile lwemali ongeke ukwazi ukuyikhipha ngokushesha. Lokhu kungathatha uhlobo lwemali ebonakalayo noma imali yangempela enezinhlawulo ezibalulekile zokuhoxa noma imithetho ekuvimbela ekuhoxeni kusenesikhathi.
Ezimweni eziningi, lokhu kuba ngesimo sesethulo esifana nokusebenzisa kwakho imali ngaphambi kwesikhathi ekhasino, sikunikeze inani lemali eyengeziwe elingana nemali oyisebenzisayo yangempela.
Ukubuyiselwa kwemali kuyatholakala kubadlali:
Faka inani elithile lemali
Dlala imidlalo ethile
Ngokucacile khetha ukungena kusikimu sokubuyisa imali
Ungawasebenzisi amabhonasi wediphozi ajwayelekile
Ngaphandle kokukunikeza imali yangempela, amakhasino angakuphindisela futhi ngemidlalo yamahhala yemidlalo ethile. Lokhu ngasikhathi sinye kukuvumela ithuba lokudlala ngaphandle kwenkokhiso kuwe, kunikeze ithuba elilingayo lokuwina ngaphandle kokutshala imali kwangempela, futhi kukugcine ubuyela ekhasino.
Ngamanye amabhonasi ekhasino, kungaba nemibandela nemibandela eminingi ehlukene engase ingacaci ngokuphelele uze udlale futhi uthole ukuthi awutholi cishe njengoba ubulindele noma kunentambo yezintambo enamathiselwe nokuthi ungayikhipha nini imali.
Ngokubuyiselwa kwemali, imithetho ivame ukuba lula kakhulu, lapho uhlangabezana nemfuneko ethile futhi nekhasino ikuvuza ngayo. Uchitha inani elithile lemali, uthola iphesenti elithile emuva, lilula kanjalo.
Inkinga enkulu ngemivuzo yokubuyisa imali ukuthi ingaba mincane ngokwedlulele. Ungahle ungatholi ngisho iphesenti elilodwa lokuchitha kwakho ekubuyiseleni imali. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi okuthile okufana ne- “100 Free Spins Uma Ubhalisa Namuhla!” kungazwakala njengokukhulu, kepha uma izingqinamba zokuwina kunoma iyiphi i-spin enikeziwe ziphansi ngokwanele (futhi cishe zihlala njalo), inani langempela liphansi kakhulu kunalokho ongakulindela.
Ngokuphambene, amabhonasi ejwayelekile ekhasino angaba muhle kakhulu uma uthola ukuthi asebenza kanjani.
Yize imigomo nemibandela ingahluka kakhulu, kunamaphuzu ayisihluthulelo avame ukuvela.
Amakhodi ephromo ngokuvamile afakwa njengesidingo esingeziwe sokuthola imali yakho ebuyiswayo. Azikho izindleko ezingeziwe ezithintekayo ekugcineni komsebenzisi, kepha abantu abaningi bayakhohlwa noma abazimisele ngokuya emzameni, bevumela ikhasino ukuthi ligcine imali yabo.
Ukuhlukunyezwa kohlelo kungaholela ekuvinjelweni kwabasebenzisi.
Abadlali kufanele babe neminyaka engu-18 noma ngaphezulu, kepha le mfuneko ingahluka kakhulu ngokuya ngezwe.
Imikhawulo ebuyisa imali ebekiwe ivame ukubekwa kumdlali ngamunye, evimbela noma ngubani ekutholeni nasekusebenziseni noma yiluphi uhlobo lokuxhaphaza ukuthola imali enkulu ekhasino.
Ukunikezwa kokubuyiselwa kwemali okuningi akunakusetshenziswa ngasikhathi sinye, ngakho-ke uzothola inzuzo eyodwa kuphela ngasikhathi sinye.
Okokuqala, bheka amakhodi ephromo bese ubona ukuthi ngabe kukhona yini okunikezwayo ongakusebenzisa. Uma kunokuningi okutholakalayo, kungadingeka ukuthi wenze izibalo ezithile bese unquma ukuthi yikuphi okungcono kakhulu, ngoba cishe ngeke ukwazi ukusebenzisa okungaphezu kokukodwa.
Okwesibili, yenza ucwaningo oluningiliziwe kuzo zonke izinhlinzeko ikhasino ngalinye elinalo. Ukunikezwa kwesingeniso kungaba okulingayo, kepha ngeke kuhlale unomphela. Ngemuva kokuthi lezo seziphelile, uzobe usebenzisa izipesheli ezibuyiselwa imali emuva, ngakho-ke kungadingeka ukuthi ulinganise izinzuzo zokuqala zesipho esihle sesingeniso ngokuqhathaniswa nezincane, kepha izinzuzo ezihlala njalo zeminikelo emihle eyisisekelo.
Okwesithathu, qiniseka ukuthi unengqondo efanelekile eya phambili. Uma inhloso yakho ukwenza imali usebenzisa indlela yokubuyisa imali, kuzodingeka ume uphinde uhlole kabusha izinto eziza kuqala kuwe. Ngeke wenze imali enkulu ngokubuyisa imali, ikhona nje ukukunikeza okungeziwe kancane.
Umuntu ukuthola kanjani ukubuyisa imali ngqo?
Noma ngabe kuyimali eyisicaba noma iphesenti, umvuzo ngokuvamile ufakwa ngqo ku-akhawunti yakho.
Ingabe ukubuyiselwa kwemali kuyazenzakalela?
Kokubili u-Yebo no-Cha, ezimeni eziningi kuzodingeka uthathe izinyathelo ezithile ukuze uthole leyo mali. Kepha amakhasino esiwabala njengamakhasino abuyisa iCash, afakwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho. Kwezinye izimo, Uzodinga ukuyihoxisa ngesandla futhi ungadinga nokufaka ikhodi ekhethekile yephromo.
Ngabe ukubuyiselwa imali kungcono kunamabhonasi ajwayelekile?
Kuya ngesiza, okunikezwayo, nezinto eziza kuqala kuwe. Uma ugembula nje kancane bese ukubiza ngokuthi kuyayeka, isithembiso esihle sokubuyisa imali singakunika umvuzo ngokugcwele bese siphela ngasikhathi sinye lapho intshisekelo yakho yokugembula iphela.